Ny fampiharana Wash dia havaozina amin'ny fanatsarana maro ary mampihena ny vidiny | Avy amin'ny mac aho
Amin'ity tranga ity dia manana fampiharana mahaliana izay manamora ny asan'ny fametrahana milina fanasan-damba isika antsoina hoe Wash, Tsy hoe hametraka irery ny akanjo hosasany izy, fa mamela antsika hahafantatra an'izao tontolo izao ireo marika amin'ireo marika entin'ny akanjo.
Tsy rindranasa vaovao ity izay vao tonga tao amin'ny Mac App Store, fa taorian'ny fanavaozana farany dia nahena nandritra ny fotoana voafetra ny vidiny ary mety hahaliana ny mividy azy io izao. Ny fanasana dia mety tena ilaina amin'ireo fotoana ireo rehefa matahotra ny hampiditra ny pataloha ankafizinay izahay rehefa mamaky ilay marika hametraka azy ireo ao amin'ny milina fanasan-damba.
Betsaka amintsika no manontany tena eo alohan'ny marika hoe inona no dikan'ireto tandindona ireto, mazava ho azy fa ny sasany amin'izy ireo dia mora takarina, saingy manana vitsivitsy ihany koa isika izay sarotra loatra ary eo no idiran'ny Wash. Misy ny marika labozia amin'ny ankamaroan'ny tranga dia marika 5 ary ireo dia manondro ireo torolàlana fanasan-damba sy fikarakarana ankapobeny ho an'ny akanjo tsirairay. Ireo marika dia mazàna amin'ity baiko ity: Manasa, manadio, manamaina, manisy vy, mandatsa-dra, fa afaka mahita marika 40 isan-karazany isika ary samy manana ny dikany manokana izy rehetra.
Miaraka amin'ity rindranasa ity izay misy ho an'ireo mpampiasa Mac, ny olana amin'ny fanavahana ny marika dia vita haingana, ary ny fampiharana dia tena tsotra sy intuitive ampiasaina. Mila eo amin'ny macOS 10.8 na avo kokoa fotsiny isika ary afaka mankafy an'ity fampiharana ity izay vao voaray ihany koa Fanatsarana ny sary ary fanamboarana bibikely sasany amin'ny andiany 1.1.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » Ny fampiharana Wash dia havaozina amin'ny fanatsarana maro ary mampihena ny vidiny